Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay muddada afarta sano ah – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – 20 ka August maanta oo kale sanadkii 2012 ayaa barlamaanka Federaalka Soomaaliya ee hada jira loo dhariyey in ay noqdaan golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya 4 sano ka hor.
Kulanka ay maanta ku yesheen magalaada Muqdisho ayey ku soo bandhigeen waxyabhii u qabsoomay ee ay ka dhexli doonaan ama ay ku wareejin doonaan Barlamaanka 10aad ee ee soo socda.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaalia Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo furitaanka kulanka maanta ka jeediyey hadal kooban ayaa cadeeyey in Barlamanaka 9aad ay sii jirayso xilhayntooda ilaa laga soo dhisayo golihii badali lahaa, sida ku cad qararkii golaha shacabka ay meel mariyen ee lagu badalay Qodobka 61aad ee Dastuurka KMG oo ka hadlaysay Muddada xil-haynta Baarlamaanka Federaalka.
Mudane Mahad Caballa Cawad Guddoomiye ku xigenka 2aad ee Golaha shacabka Federaalka Soomaaliya ayaa Xildhinabada ka hor akhriyey waxyabhii ugu muhiimsanaa ee golaha u qabsoomay 4tii sano e ay jireen oo ay ku jirto xarunta Villa Haragysa oo leh xafiisyo kale duwan iyo hoy martida loogu talagalay in lagula shiro.
“4tii sano ee uu jiray baarlamaanka Federealka Soomaliya waxaa naftooda ku waayey weraro argagxiso, iyagoo gudanayo waajibkooda shaqo 18 mudane Allah u naxriistee iyo 8 ka mid ah shaqaalaha Barlamaanka” ayuu yiri Mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Guddoomiyeha barlamaanka Federaalka Soomaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa Alle uga baryey in uu janadii Fardowso ka waraabiyo xildhibaanada geeriyooday iyo shaqalaha baarlamanka oo qaar badan oo ka mid ah ay dishay gacanta cadowga argagxisada Al-shabaab.
Barlamanka Federaalka Soomaaliya oo ah golahii 9aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa mudadii ay xilka hayeen waxa ay ku meel mariyeen ama ku ansxiyeen in ka badan 20 sharci oo muhiim u ah dalkeena xiligan ku jira ka soo kabashada burburkii , waxa ayna diyaariyeen sharuucyo iyo agab ay ka dhexli doonaan baarlamanaka 10aad